ကျနော်တို့ လက်ရှိအသုံးပြုနေတဲ့ကားတွေမှာ ကားစက်နှိုးဖို့အတွက်ရယ်၊ ကားအတွင်းပိုင်း Accessories တွေဖြစ်ကြတဲ့ (ကက်စက်၊ တီဗွီ၊ မီး) အစရှိတာတွေ အသုံးပြုဖို့အတွက်ရယ် ကားဘက်ထရီအိုးဆိုတာ မရှိမဖြစ်အရာတစ်ခုပါ။ ဒီနေ့ ဒီဘက်ထရီအိုးကို သက်တမ်းကုန်လို့ဖြစ်စေ ကားပြုပြင်တဲ့နေရာမှာလိုအပ်လို့ဖြစ်စေ ဖြုတ်ရတော့မယ်ဆိုရင် စနစ်တကျ ဘယ်လိုဖြုတ်တပ်လုပ်ဆောင်ရမလဲဆိုတာ တင်ပြပေးပါ့မယ်။
ကားတွေမှာသုံးနေတဲ့ ဘက်ထရီအိုး 12 V အိုးတွေ၊ 24 V အိုးတွေမှာ (Positive Terminal +) နဲ့ အနှုတ် (Negative Terminal -) နှစ်ခုရှိတဲ့နေရာမှာ ဘယ်ခေါင်းကို အရင်ဖြုတ်ရမလဲမေးရင်
အနှုတ်ခေါင်း (Negative Terminal) ကို အရင်ဖြုတ်ရပါမယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲမေးရင် အခုခေတ်ပေါ်ကားတွေမှာ အနှုတ် (Negative Terminal) က ကားရဲ့ ဘော်ဒီ (Body) တစ်ခုလုံးနဲ့ ချိတ်ဆက်ထားပါတယ်။ ကားမှာတပ်ဆင်ထားတဲ့ သံထည်ပစ္စည်းတွေမှန်သမျှက ဘက်ထရီရဲ့ အနှုတ်ငုတ်နဲ့ တစ်ဆက်ထဲပါပဲ။ ဒီတော့ ခင်ဗျား အနှုတ်ငုတ်ကို အရင်မဖြုတ်ဘဲ အပေါင်းကိုအရင်ဖြုတ်ပါပြီတဲ့ ……
အပေါင်းငုတ်မှာတပ်ထားတဲ့ Nut ခေါင်းကိုချွတ်ဖို့ Open Spanner, Ring Spanner (ဂွ၊ ဂွင်းတွေ) နဲ့ ဖြုတ်ပါပြီ။ အဲဒီဂွဂွင်းတွေက သံတွေဆိုတော့ဖြုတ်ရင်းနဲ့ မတော်တဆကားဘော်ဒီတို့၊ ကားအင်ဂျင်မှာ တပ်ထားတဲ့သံတို့၊ သတ္တုအစိတ်အပိုင်းတွေနဲ့ သွားထိပြီဆို အပေါင်းနဲ့အနှုတ် ထိမိ Short ကျပြီး Spark ခတ်တာတို့၊ မီးလောင်တာတို့ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ကားမှာရှိတဲ့ ပစ္စည်းတွေ ပျက်စီးတာတို့ Fuse ပျက်တာတို့၊ Relay တွေပျက်စီးတာတို့၊ ECU တွေ ပျက်စီးတာတို့ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ မတော်လို့ထိမိတာပြင်းထန်ရင် ဘက်ထရီအိုးကွဲထွက်ပြီး အက်ဆစ်တွေဘာတွေ လောင်နိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အနှုတ်ငုတ်ကို အရင်ဖြုတ်ခိုင်းတာပါ။
အနှုတ်ငုတ်ကို အရင်ဖြုတ်မယ်ဆိုရင်တော့ ဂွတွေ ဂွင်းတွေက ကားဘော်ဒီနဲ့ထိထိ သံထည်အစိတ်အပိုင်းတွေနဲ့ထိထိ ထိချင်တာထိ အနှုတ်အနှုတ်ချင်းမို့ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး။ အနှုတ်ငုတ်ကို ဖြုတ်နေချိန် ထိမရတာဆိုလို့ ဘက်ထရီအပေါင်းငုတ်တစ်ခုတည်းပဲ ရှိပါတယ်။ ကားဘော်ဒီက စ လို့ ကျန်တဲ့ ကြိုက်တဲ့ အစိတ်အပိုင်းတွေထိချင်တာထိလို့ရပါတယ်။ အဲဒီတော့ အေးဆေးဖြုတ်ရပါတယ်။
အနှုတ်ငုတ်ကိုအရင်မဖြုတ်ဘဲ သူနဲ့ဆန့်ကျင်ဖက် အပေါင်းကို ဖြုတ်မယ်ဆိုရင်တော့ လျှပ်စစ်ကူးနိုင်တဲ့ ဘာဆို ဘာနဲ့မှ မထိအောင်ဂရုစိုက်ရမှာပါ။ ဘာဖြစ်လို့ဆိုရင် ကားတစ်စီးလုံးက ဘက်ထရီ အနှုတ်ငုတ်နဲ့ဆက်ထားပြီး Ground ကျနေလို့ပါပဲခင်ဗျာ။ အဲဒီတော့ အန္တရာယ်ဖြစ်ဖို့အလားလာများတယ်၊ ကားအင်ဂျင်ခန်းထဲ အစာပလာ များတဲ့ ကားတွေဆို ပိုဆိုးပါတယ်။
ဒါကြောင့် အနှုတ်ငုတ်ကို အရင်ဖြုတ်ခိုင်းတာပါ။ တခြား အသိမှားနေကြသလို လျှပ်စစ်တွေက ကားကိုယ်ထည်ထဲမှာကျန် ထွက်စရာမရှိတာတို့၊ ဓာတ်လိုက်လို့ဆိုတာ လုံးဝမဟုတ်ပါဘူး။
အဲဒီလို ဓာတ်လိုက်ဖို့မပြောနဲ့ 12 V DC တို့ 24 V DC ဘက်ထရီအိုးက အနှုတ်ငုတ်ရော အပေါင်းငုတ်ရော တစ်ပြိုင်တည်းကိုင်တောင် ဓာတ်မလိုက်ပါဘူး။ ဒီတော့ ကားဘော်ဒီထဲ လျှပ်စစ်ကျန် ဓာတ်လိုက်တယ်သေတယ် ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။
ဘက်ထရီအိုး က အနှုတ်နဲ့ အပေါင်းမှာ ဘယ်ဟာ အရင်ဖြုတ်သင့်လဲဆိုတာကတော့ အပေါ်မှာ ကျနော်ရှင်းပြတဲ့ အကြောင်းရာကြောင့်ပါ။
အနှုတ်နဲ့အပေါင်း နှစ်ခုလုံး ဖြုတ်ထားပြီးရင်ရော ဘယ်ဟာကို အရင်တပ်ရမလဲ?
အပေါင်းကို အရင်တပ်ရပါမယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်တော့ အပေါ်မှာရှင်းပြထားတဲ့ အကြောင်းရာကြောင့်ပါပဲ။ နှစ်ခုစလုံးဖြုတ်ထားတဲ့အချိန် အပေါင်းကိုအရင်တပ်မယ်ဆိုရင် အေးအေးဆေးဆေး လွတ်လွတ်လပ်လပ် တပ်ရပါမယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ အနှုတ်ငုတ်ကဖြုတ်ထားတာမို့ ကားဘော်ဒီရော ကားမှာရှိတဲ့ သံထည် သတ္တုထည်မှန်သမျှ ဘာနဲ့မှ ထိမနေပါဘူး။ ဒီတော့ အပေါင်း Nut တွေကို ကြပ်မယ့် ဂွတွေ ဂွင်းတွေက ဘာနဲ့ထိထိ အေးဆေးပါပဲ၊ ဘာ Short မှ မကျနိုင်ပါဘူး။ အပေါင်းတပ်ပြီးမှ အနှုတ်ကို တပ်တော့လည်း အနှုတ်ကိုတပ်နေချိန် အနှုတ်ငုတ်မို့အပေါင်းငုတ် တစ်ငုတ်တည်းကလွဲရင် ကားဘော်ဒီနဲ့ထိထိ အင်ဂျင်နဲ့ထိထိ အေးဆေးပါပဲ။ ဒီတော့ ဘာ Short မှ မကျနိုင်တော့ပါဘူးခင်ဗျာ။ Be Safe , Safety First ပါပဲခင်ဗျာ။
ကားဘက်ထရီအိုးကိုဖြုတ်မယ်ဆို အနှုတ်ကို အရင်ဖြုတ်ပြီးမှ အပေါင်းဖြုတ်။
ပြန်တပ်မယ်ဆို အပေါင်းကိုအရင်တပ်၊ ပြီးမှ အနှုတ်တပ်ပါ။
ဒါဆိုအားလုံး အေးအေးဆေးဆေးနဲ. အန္တရာယ်ကင်းကင်းပါပဲခင်ဗျာ။
နောက်တစ်ချက်ပြောချင်တာကတော့ အခုခေတ်ပေါ်ကားတွေမှာ ကားဘက်ထရီအိုးလဲလို့ဖြစ်စေ၊ ကားပြုပြင်တဲ့ နေရာမှာလိုအပ်လို့ဖြစ်စေ ဘက်ထရီအိုးတွေကို ဖြုတ်မယ်ဆိုရင် ဒီအတိုင်းဖြုတ်လို့မရပါဘူး။
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်တော့ အခုခေတ်ပေါ်ကားတွေမှာပါတဲ့ ECU တွေ၊ BCM လို့ခေါ်တဲ့ (Body Control Module) တွေ၊ နောက် TV Accessories တွေမှာ Memory စနစ်တွေပါဝင်ပြီး ဘက်ထရီခေါင်းကိုဖြုတ်လိုက်တာနဲ့ အဲ့ဒီ Memory စနစ်တွေပျက်စီးစေပြီး ဘက်ထရီပြန်တပ်ချိန်မှာ မှန်တင်မှန်ချတွေမရတာ၊ Back Camera တွေမရတာ၊ မျဉ်းကွေးပျောက်တာ၊ နောက် TV တွေမှာ Factory Code တွေ တောင်းတာ တွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။ တချို့ပြစ်ချက်တွေက အလွယ်တကူပြန်လည်ကောင်းမွန်အောင် လုပ်ဆောင်နိုင်ပြီး တချို့ Reset code တောင်းတာမျိုးဆိုထုတ်လုပ်တဲ့ ကုမ္ပဏီကနေပြန်လည်ဝယ်ယူရပြီး မော်ဒယ်မြင့်ကားတွေအတွက် ဈေးကြီးတတ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် အခုခေတ်ပေါ်ကားတွေရဲ့ ဘက်ထရီတွေကို ဖြုတ်မယ်ဆိုရင်တော့ OBD2Vehicle Emergency Power Supply Cable ဆိုတာလိုအပ်ပါတယ်။ အဲဒါကို ဘက်ထရီအိုးမဖြုတ်ခင် တစ်ဖက်ခေါင်းက ကားရဲ့ OBD2အပေါက်မှာထိုး၊ တစ်ဖက်က 12 V Battery နဲ့ ချိတ်ဆက်ထားပြီးမှ ဖြုတ်မယ်ဆိုရင်တော့ ကားမှာပါတဲ့ ECU တွေ၊ BCM တွေ Accessories တွေထဲက Memory တွေကို မပျောက်ပျက်စေဘဲ ပါဝါရနေစေတာမို့ ဘာပြဿနာမှ မရှိနိုင်ပါဘူးခင်ဗျာ။
OBD2ခေါင်းပါတဲ့ Vehicle Emergency Power Supply Cable တွေကို ဈေးကွက်ထဲမှာ အလွယ်တကူ ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါတယ်။ Vehicle Emergency Power Supply Cable တပ်ဆင်ပုံကိုလည်း အောက်ကပုံမှာ လေ့လာနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
ကားဘက်ထရီ စနစ်တကျ ဘယ်လိုထောက်နှိုးမလဲ
ကားဘက်တရီထောက်နှိုးတယ်ဆိုတာကလည်း ကားမောင်းတဲ့သူတိုင်း မဖြစ်မနေ ကြုံတွေ့လာရနိုင်တဲ့ကိစ္စပါ။ ကားဘက်ထရီမကောင်းလို့ဖြစ်စေ၊ ကားအားသွင်းစနစ်မကောင်းလို့ဖြစ်စေ၊ ကားရပ်ထားရင်း ပြန်နှိုးမရတော့ဘူး ဒါမှမဟုတ် ကားမောင်းနေရင်းကားထိုးရပ်သွားပြီး ပြန်နှိုးမရတော့တဲ့အချိန် ကားဘက်ထရီထောက်နှိုး ရနိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုကြုံတွေ့လာရတဲ့အခါမျိုးမှာ ကားဘက်တရီအိုးကို ဘယ်လိုစနစ်တကျ ထောက်နှိုးရမလဲဆိုတာ သိဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
ပထမဆုံး ကားကို Parking Brake (ဟန်းဘရိတ်) ဆွဲထားပါ။
ကားမှာပါတဲ့ Accessories (TV , Aircon , Lighting) တွေပိတ်ထားပါ။
အားအပြည့်ရှိတဲ့ ဘက်ထရီတစ်လုံးနဲ့ ထောက်ကြိုး ၂ ချောင်း ရှာပါ။
အားရှိတဲ့ဘက်ထရီနဲ့ ထောက်ကြိုးရပြီဆိုရင် အားကုန်နေတဲ့ ဘက်ထရီအိုးရဲ့အပေါင်းငုတ် (+) မှာ ပထမဆုံး ထောက်ကြိုးကလစ် တစ်ဖက်ချိတ်ပါ။
နောက် အဲဒီထောက်ကြိုးတစ်ဖက်ကို အားရှိတဲ့ဘက်ထရီရဲ့ အပေါင်းငုတ်မှာ (+) ချိတ်ပါ။
နောက်ထောက်ကြိုးတစ်ချောင်းကို အားရှိတဲ့ ဘက်ထရီရဲ့အနုတ်ငုတ်မှာ (-) ချိတ်ပါ။
အဲဒီကြိုးကိုပဲ အားကုန်နေတဲ့ဘက်ထရီရှိတဲ့ ကားရဲ့ဘော်ဒီ (ဒါမှမဟုတ်) ကားရဲ့အင်ဂျင်ကို ချိတ်ဆက်ပါ။
အဲဒီလိုနည်းနဲ့စနစ်တကျချိတ်ဆက် ကားဘက်ထရီထောက်ပြီး ကားစက်နှိုးရပါမယ်ခင်ဗျာ။ အဲဒီလို ထောက်နှိုးပြီး ကားစက်နိုးသွားတယ်ဆိုရင်တော့ ကားဘက်ထရီထောက်ကြိုးတွေကို စနစ်တကျပြန်လည်ဖြုတ်ရပါမယ်။
အားကုန်နေတဲ့ ဘက်ထရီရှိတဲ့ကားရဲ့ဘော်ဒီ မှာရှိတဲ့ အနှုတ်ကြိုးကို အရင်ဖြုတ်ပါ။
အားရှိတဲ့ ဘက်ထရီထောက်အိုးမှာတပ်ဆင်ထားတဲ့ အနှုတ်ကြိုးကို ဒုတိယဖြုတ်ပါ။
အားရှိတဲ့ ဘက်ထရီ အပေါင်းငုတ်ကို တတိယ ဖြုတ်ပါ။
အားကုန်နေတဲ့ ဘက်ထရီအိုးရဲ့အပေါင်းငုတ်ကို နောက်ဆုံးထားဖြုတ်ရပါမယ်။
တပ်တုန်းက 1,2,3,4 အစဉ်လိုက်တပ်ပြီး ပြန်ဖြုတ်မယ်ဆို တပ်တဲ့နည်းကို နောက်ကနေပြန်လည် 4,3,2,1 ဆိုပြီး ပြန်ဖြုတ်ရမှာပါ။ ဒါဆိုရင် ကားဘက်ထရီကို အန္တရယ်ကင်းကင်းနဲ့စနစ်တကျ ထောက်နှိုးလို့ရနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ကားဘက်ထရီထောက်နှိုးတာဟာ အမြင်လွယ်ပေမဲ့ စနစ်တကျမသိရင်၊ လုပ်မှားကိုင်မှားတွေ လုပ်မိရင်၊ မတော်တဆ အပေါင်းအနှုတ် မှားတပ်မိရင် ထောက်မိရင် Main Fuse တွေပျက်စီးတာက စ လို့၊ ကားမှာပါတဲ့ ECU ပိုင်းတွေ Alternator တွေနဲ့ အခြား Electrical , Electronic ပစ္စည်းတွေအများကြီး ပျက်စီးနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ အပေါင်းအနှုတ် ရှော့ကျပြီး ကားမီးလောင်နိုင်တာမျိုးလည်း ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် စနစ်တကျ ဖြုတ်တတ်၊ တပ်တတ်၊ ထောက်နှိုးတတ်ဖို့လိုအပ်လှပါတယ်။
(မှတ်ချက် ။ တချို့ကားဘက်ထရီအိုးတွေမှာတော့ သက်တမ်းကုန်နေတာရယ်၊ ကားအခံလုံး၀ ကုန်ဆုံးသွားတာရယ်ကြောင့် ကားဘက်ထရီထောက်နှိုးသည့်တိုင် စက်နှိုးနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး၊ ဒီလိုမျိုးကြုံတွေ့လာရတယ်ဆိုရင်၊ အား လုံး၀ကုန်နေတဲ့ ဘက်ထရီကိုဖြုတ်၊ အားကောင်းမွန်တဲ့ ဘက်ထရီကိုတပ်နှိုးမှသာ ကားစက်နိုးလာနိုင်ပါတယ် ခင်ဗျာ)